मेगा बैंकको नाफा कटेन अर्ब, ७९ करोडमा सिमित  OnlineKhabar
मेगा बैंकको नाफा कटेन अर्ब, ७९ करोडमा सिमित
२७ साउन, काठमाडौं । गत आव २०७३/७४ मा मेगा बैंकको नाफा करिब ४३ प्रतिशतले बढेर ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७२/७३ मा भने बैंकको नाफा ५५ करोड रहेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ५३ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले फि कमिसनबाट ७ करोड रुपैयाँ, अन्य सञ्चालनबाट १७ करोड र बिदेशी मुद्राको कारोबारबाट बैंकले १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
बैंकले यसअघि नोक्सान वापत राखेको ३ करोड ५९ लाख फिर्ता ल्याएको छ । त्यस्तै, यसपटक भने सम्भावित नोक्सान व्यवस्थाको लागि १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । बैंकको खराब कर्जा १.३६ प्रतिशत रहेको छ भने प्रावधान १ सय २३ प्रतिशत गरेको छ ।
बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । चुक्ता पुँजी बढेपछि सेयरमा प्रतिफल सामान्य घटेको छ । यो दर १६.८८ प्रतिशत छ । प्रतिसेयर आम्दानी १७.२७ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको सञ्चिती १ अर्ब २८ करोड रहेको छ । बैंकले यसपटकको नाफाबाट सञ्चितमा राख्नुपर्ने २० प्रतिशत बराबरको रकम र सामाजिक दायित्वको लागि छुट्याउनु पर्ने १ प्रतिशत अलग्याउदा साधारण सेयरको आधारमा लगभग १३.६४ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
बैंकको निक्षेप संकलन २६ प्रतिशतले बढेर ३८ अर्ब र कर्जा लगानी २६ प्रतिशतले बढेर ३४ अर्ब पुगेको छ । बैंकको सीसीडी रेसीयो ७०.०५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कर्जा लगानीको लागि आधार लिइने बेस रेट ११ प्रतिशत रहेको छ । बैंकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात १४.८७ रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय २७.९७ रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकको कर्मचारी लागत १० करोडले बढेको छ भने अन्य सञ्चालन लागत पनि करिब ७ करोडले वृद्धि भएको छ । बैंकले ओभर ड्राफ्ट शीर्षकमा १७ अर्ब ८५ करोड लगानी गरेको छ ।
२०७४ साउन २७ गते ११:२७ मा प्रकाशित
नेपालका जग्गाधनीको सबै विवरण विदेशमा !
विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्दै प्राधिकरण
सडक निर्माणका कारण ध्वस्त हुँदैछन् पदमार्ग
उपभोक्तामाथि खेलवाडः हजारौं फर्ममा अनुगमन, कारवाहीमा आलटाल
लोडसेडिङ हटेसँगै कम हुँदै आगलागीका घटना
‘रुद्रप्रिया’को प्रिमियरमा रेखा र शिल्पा एकसाथ
श्वेता तिवारीको दोस्रो विहे पनि टुट्ने संघारमा
कामकाजी केदारलाई सरकारले बनायो ‘माग्ने बुढा’
सीडीओको आँखामा खुर्सानी हाल्ने ‘खुर्सानी मैया’
२० वर्षदेखि अमेरिकामा रहेका एक कलाकारको फोटोकथा
शाहरुख र करणको सम्वन्ध चिसियो, कारण यस्तो
कतै अण्डा बिग्रिएको त छैन ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
चर्चिलले फ्याँकेको चुरोटको ठुटो १२ लाखमा बिक्यो